INqabayokulinda​—⁠Efundwayo, Meyi 2020
Lo magazini unezihloko ezizofundwa ngoJulayi 6–Agasti 2, 2020.
Isihloko esifundwayo 19: Julayi 6-12, 2020. Siyabubona ubufakazi bokuthi isiprofetho sikaDaniyeli esimayelana “nenkosi yasenyakatho” ‘nenkosi yaseningizimu’ siyaqhubeka sigcwaliseka. Yini esenza siqiniseke kangaka ngalokho? Kungani kudingeka siyiqonde imininingwane yalesi siprofetho?
Isiprofetho esikhuluma ‘ngenkosi yasenyakatho’ kanye ‘nenkosi yaseningizimu’ senzeka ngesikhathi esisodwa nezinye iziprofetho. Lezo ziprofetho zifakazela kanjani ukuthi leli zwe maduze lizobhujiswa?
Isihloko esifundwayo 20: Julayi 13-19, 2020. Ubani “inkosi yasenyakatho” namuhla, futhi izobhujiswa kanjani? Ukwazi izimpendulo zale mibuzo kuzoqinisa ukholo lwethu futhi kusisize silungele ushushiso esizobhekana nalo maduze.
Isihloko esifundwayo 21: Julayi 20-26, 2020. Lesi sihloko sizosisiza simbonge uJehova futhi sibonge nangezipho ezintathu aye asipha zona. Sizophinde sisisize sikwazi ukubonisana nalabo abangabazayo ukuthi uNkulunkulu ukhona.
Isihloko esifundwayo 22: Julayi 27–Agasti 2, 2020. Esihlokweni esidlule, sixoxe ngezipho eziningana ezivela kuNkulunkulu esikwazi ukuzibona. Lesi sihloko sizogxila engcebweni esingayiboni nendlela esingabonisa ngayo ukuthi siyabonga ngayo. Sizophinde sisisize simbonge nakakhulu uJehova, osinikeze lezi zipho ezinhle.